himalkhabar.com . ५ महीना अघि
विभागीय जिम्मेवारी टुंग्याउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज दिउँसाे तीन बजे बोलाइएको छ । शीर्ष नेताहरुबीच नै सहमति जुट्न नसकेपछि नेकपाको बैठक लगातार स्थगित हुँदै आएको छ । १३ सा...
विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नेकपा सचिवालय बैठक बिहीबार सम्मको लागि स्थगित
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बुधबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सचिवालय बैठकअगाडी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको छ...
नेकपाको सचिवालय बैठक फेरि स्थगित
kendrabindu.com . ५ महीना अघि
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक फेरि स्थगित भएको छ। लामोसमयपछि बुधबार तय भएको बैठक आन्तरिक छलफलका लागि भन्दै स्थगित गरिएको हो। जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वका बिषयमा टुं...
स्कुल विभागमा सहमति जुट्न नसक्दा नेकपा सचिवालय बैठक फेरि स्थगित
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक फेरि स्थगित भएको छ । स्कुल विभागमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच कुराकानी नमिल्दा बुधबार दिउँसो ३ बजे बस्ने भ...
नेकपाका अध्यक्षद्वय अनौपचारिक छलफलमा, तीन बजे सचिवालय बैठक
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंगापुरबाट फर्किएलगत्तै छलफलमा जुेटका छन् । स्कूल विभागको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विवाद सल्झन नसक्दा नेकपा सचिवालयको...
नेकपाको सचिवालय बैठक फेरि स्थगित्
काठमाडौं, २९ साउन । आज बस्ने भनिएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक स्थगित् भएको छ । पार्टी्भित्र आन्तरिक छलफल गर्नु पर्ने देखिएपछि बैठक बिहीबारका लागि सरेको प्रधानमन्त्...
जिम्मेवारीको विवाद मिलाउन नेतृत्व असफल, सचिवालय बैठक स्थगित
साउन २९, २०७६ काठमाडौं – बुधवार बस्ने भनेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीबीच विभागको नेतृत्वका व...
काठमाडौं : लगातार दुई पटक स्थगित भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज बस्दै छ। बैठक दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ...
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आज बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बैठकअघि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको छलफलमा विवादीत विष...
makalukhabar.com . ५ महीना अघि
साउन २९, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बैठक आज (बुधबार) बस्दैछ ।
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक फेरि स्थगित भएको छ । स्कुल विभागसहित जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व लगायत विषयमा विवाद कायमै रहँदा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर...